Depot 4ème - Toamasina: Faty efa namofona no nanaitra ny manodidina
mardi, 14 mai 2019 17:43
Nisy vazaha lahy avy any Guadeloupe antsoina hoe Francisco Lopez, 64 taona, sy ny vadiny Soa Monica, 48 taona, ary Randrianjaka Ferlando, zazalahy 07 taona, natsangan'izy ireo maty nisy namono tao an-tranony. Ny alatsinainy 13 mey 2019 vao hita ny razana, izay efa tao anatin’ny fahasimbana.
Ny fofona maimbo be ren'ny olona manodidina no nanokafana ny trano nataon'ny filoham-pokontany sy ny Fokonolona.
Faty efa simba, niampatra tao amin'ny trano fidiovana no hitan'ny olona, ankoatra ireo entana misaritaka eran'ny trano ihany koa.
Raha ny fanazavana dia ny alin'ny alarobia 08 mey hifoha ny alakamisy 09 mey 2019 no mety nitrangan'ny famonoana satria ny alarobia mbola nianatra tao amin'ny « Lycée Français » fianarany ilay zazalahy fa ny alakamisy izy vao tsy tonga nianatra intsony.
Tombanana ho andian-jiolahy no niditra tao amin'izy ireo, ary nohidian'izy ireo avy ao anatiny ny trano nanaovan'izy ireo izay tiany tao, ary teny an-tafontrano izy ireo no nivoaka taorian'izay.
Nikasa ny hiverina hamonjy ny tanindrazany any Guadeloupe ilay vazaha amin’ny 20 mey 2019 izao no sady hampilaza amin'ny fianakaviany ny fikasany hanao mariazy amin'ity vehivavy gasy ity amin’ny volana desambra 2019.
Tsy ity ihany ny vono olona nitranga tao amin'ity Fokontany ity, fa vao telo herinandro no nisy, ary olona efatra no efa voasambotry ny Polisy misahana ny heloka be vava eto Toamasina omaly alatsinainy alina, ary efa miatrika fakana am-bavany azy ireo amin’izao fotoana izao, izay heverina fa misy ifandraisany amin'ireto famonoana azy telo mianaka ireto.
Efa mandray an-tanana ny raharaha koa izao ny masoivoho frantsay eto Toamasina sy eto Madagasikara momba ity raharaha ity.